March 2019 - Page 6 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 3, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub Ingiriiska u fadhiyi doona Soomaaliya. Danjiraha cusub Ben Fender ayaa aqbalaada kadib kulan la yeeshay […]
March 2, 2019 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) 26 xubnood oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ku sheegay in duqeyntu ay ka dhacday gobolka Hiiraan […]
March 1, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dhacaan ayaa laga qaadi doonaa eedaysanayaasha looga shaki qabo in ay ka dambeeyeen kufsi iyo dil loo geystay gabar da’ yar gudaha magaalada Gaalkacyo, sida uu sheegay xeer ilaaliye ku xigeenka Puntland. Maxamed […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 18 qof ayaa ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay fiidkii. Qaraxa ayaa lala beegsaday wadada Maka Al Mukarama taasoo ay kuyaaliin huteelo, dukaamo iyo makhaayado, sida masuuliyiin […]
Jowhar-(Puntland Mirror) Wiil Soomaali ah oo lix iyo toban jir ah ayaa diiday xil loo magacaabay oo ah guddoomiye ku xigeen isaga oo u baqay ammaankiisa. Faysal Cabdullaahi Cumar ayaa xilka ka qaban lahaa magaalada [...]